२३०० पुगे संक्रमितः तपाईंको जिल्लामा कति ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः नेपालमा हालसम्म सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या २३०० पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्क्रमितमध्ये ९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २७८ जना निको भएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार बुधबार मात्रै नेपालमा थप २०१ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । बुधबारै एकजनाको मृत्यु हुँदा ४७ जना निको भए ।
पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना फैलिँदै ६४ जिल्लामा पुगिसकेको छ ।
हेर्नुस प्रदेशमा कोरोनाको अवस्थाः
सबैभन्दा बढी संक्रमित प्रदेश नम्बर २ मा छन् । त्यहाँ ८६० जनामा कोरोना पुष्टि हुँदा १ जनाको मृत्यु भएको छ भने ११० जना निको भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस आज अहिलेसम्म थप २४८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
प्रदेश २ पछि प्रदेश ५ मा संक्रमित धेरै छन् । प्रदेश ५ मा ८१२ संक्रमित, १ जनाको मृत्यु र ७९ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा २६९, प्रदेश १ मा १८६, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८, बागमती प्रदेशमा ५८ र गण्डकी प्रदेशमा ३७ जना कोरोना संक्रमित छन् ।
याे पनि पढ्नुस को हुन सोमबार बिहान थपिएका कोरोना संक्रमित ?
६४ जिल्लामा कोरोना पुग्दा ६ जिल्लामा संक्रमितको संख्या सय नाघेको छ ।
सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुमा ४०६, रौतहटमा ३१६, बाँकेमा २१३, सर्लाहीमा १४८, झापामा ११४ संक्रमित छन् ।